Ry mpivarotra, mampiasa horonantsary ve ianao?
Talata, Jona 12, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Niroborobo haingana ny vidéo tao amin'ny tsenan'ny mpanjifa tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary eo an-dàlam-be hanolo ny lahatsoratra an-tsoratra ho fomba fifandraisana matanjaka amin'ny Internet. Nielson dia nitatitra fa tamin'ny 2011, ny onjam-peo dia 31.5 isan-jato tamin'ny taona lasa, nahatratra 14.5 miliara steams, miaraka amin'ny fijerena horonantsary 2 lavitrisa isan'andro. Izany dia mahatonga ny horonan-tsary ho mahazatra toy ny fisintomana mozika, fizarana sary ary mailaka.
Ity misy horonantsary tsara avy amin'ny ReelSEO momba ny lohahevitra:
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny horonantsary, ny orinasa dia afaka mamaky ilay tokonam-bidy tokana ilainy hamadihana ny mpitsidika ho mpanjifa… fifandraisana manokana. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny horonan-tsary miresaka:
aza esory ny horonan-tsarinao. Makà takelaka fototra vitsivitsy ary manaova resaka amin'ny fakantsary. Tsy voatery ho tonga lafatra (sy tsy tokony hatao).
Tohizo ny anao fohy ny horonan-tsary… 1 ka hatramin'ny 3 minitra. Tongava mahitsy amin'ny teboka raha tsy hahafoy ny olona ny mijery. Raha maharitra ny horonan-tsarinao, manapaha banga ary manandrama hanafainganana ilay clip. Matetika ianao dia afaka mandingana kely ilay horonan-tsary amin'ny fanaovana izany.
Makà orinasa mpanatontosa horonan-tsary hiasa amin'ny matihanina intro sy outro ahafahanao mifangaro amin'ny horonan-tsarinao amin'ny rindrambaiko famokarana horonantsary toa anao iMovie or Windows Movie Maker.
Raketo an-tsoratra avo-famaritana ary miaraka amina fakan-tsarimihetsika tsara. Mety be ny iPhone!
Akatona ny horonan-tsarinao tsy mivarotra amin'ny filazanao amin'ny olona ny fomba hahazoany mihazona anao, ahafahan'izy ireo mahazo fampahalalana bebe kokoa, sns.. Ny olona mahita dokam-barotra isan'andro ary tsy miraharaha azy ireo… aza manao varotra!
Mandany fotoana hanoratana a lohateny maharesy lahatra ho an'ny horonan-tsarinao ary ampiasao tsara ny teny lakile. Youtube no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa!
BTW: Amin'ny Martech Zone, fantatray fa ity dia singa iray amin'ny tranokala tsy ampy. Tsy mbola nahazo ny raikipohy tena mety isika… fa manantona ao, ho avy izy io!
Tags: horonantsary mahasarikavideo fohyvideo marketing